Isenzo esibambisanayo malunga neKreife Crime OPEN INVITE - Element Society
Joyina iqela le Element
Isenzo esibambisanayo malunga neKebife Ulwaphulo-mthetho OPEN INVITE
Oktobha 5, 2018
Ileta evulelekileyo kubaphathi beengingqi, ezopolitiko, abasebenzi bolutsha, abaqeqeshi, iifunivesithi, iinkonzo zikawonkewonke, abatsha abantu, uluntu kunye nabani na ofuna ukuphela kwesigebito sezondo ezitratweni zethu.
Wonke umntu uyazi ukuba ulwaphulo-mthetho lweqebunga yingxaki enkulu kwilizwe nakulo, ngokukodwa ekuchaphazela abantu abatsha.
Sonke kufuneka sisebenzisane kunye nenjongo yokuphelisa ubugebengu bamacwe ukusuka kwisixeko sethu. Kubalulekile ukuba sonke sidibaniswe, sihlangene ngaphambili, kunye nemiyalezo ehambelanayo kunye nokungenelela okuncedisayo.
Iqela lethu e-Element liye lisebenza kunye nabalingani kunye ne-South York Police Police kunye ne-Sheffield Hallam University ukuba baqhube uphando ngokuphambili kwiimbono zabantu abatsha ngobunini bomhlaba kunye nobugebengu.
Idatha yokuqala yedatha yokuqala kunye nezibalo sele zilungele kwaye ndazibandakanya ezi ekupheleni kweli bhulogi. I-132 yabantu abaselula abaneminyaka eyi-16-17 baye bahlolisiswa. Uphando lubandakanya yonke indawo yeSheffield. Siyakwandisa ubukhulu besampula kwiinyanga ezimbalwa ezizayo.
Kukho abantu abancinci be-30 (abaneminyaka eyi-16 ukuya kwi-18) abafuna ukubandakanyeka kwiprojekti yokuthintela ulwaphulo-mthetho. Aba bantu abatsha baye bahlola umxholo wevidiyo baze bavakalise iingcamango. Siza kuba ne-workshop yezobugebengu be-knife yamahhala efumanekayo ezikolweni nakwabanye ootitshala eSheffield.
Zininzi ezinye iingxoxo malunga nobugebengu bamacwe okwenzeka kwisixeko. Sithanda ukuzisa ezi ngxoxo ukuze senze nayiphi na isenzo siphumelele ngokunokwenzeka ekunciphiseni impembelelo esheshayo yobundlobongela bamasebe kunye nokubeka isicwangciso esihle kwixesha elizayo.
Umhlobo wam Will Earp (will.e@elementsociety.co.uk / 0114 2999 210) uphakamisa ukusebenzisana kwethu kunye namaqabane angoku.
Nceda ungene kumnxeba ukuba ungathanda ukuthatha inxaxheba kwingxoxo yeqela, okanye uza kuzithetha noWe.
Zive ukhululekile ukudlulisela le bhulogi kubani na okholwayo ukuba yinxalenye ycoko.
UChristopher Hill (FRSA)
Igosa eliphethe i-ofisi
Iziphumo zokuqala * Uphando lweziphumo (n = 132) Kubantu abaselula abaphandwayo:
I-90% yabantu abaye bathatha i-knife baneentanga ezithwala imimese
I-43% ethwala ibhokhwe ihlala kwi-S6 okanye i-S7
I-52% eyayithatha ibhokhwe yayinguBlue British
I-73% ikholelwa ukuba abantu bayithwala imimese ukukhusela, bazive bengakhuselekanga
I-16% ikholelwa ukuba abantu bayithwala imimese ngenxa yezenzo ezinxulumene nezigulane
I-15% ikholelwa ukuba abantu bayathwala imimese ngokumalunga nomnxeba wezenhlalakahle (kubonwa ngathi 'kupholile' ngabaontanga.)
I-57% yabathathi-nxaxheba bathi ulwaphulo-mthetho lwamaqebunga lwenzeka ngenxa yemisebenzi ehambelana nezigulane, okanye iingxabano / iingxabano phakathi kwamaqela
I-67% yabangqina bethwele umkhwa, waphendula ukuba abantu baphathe imimese ukukhusela, kwaye i-63% iphendule ukuba lolwaphulo-mthetho lwamaqebunga lwenzeka ngenxa yezenzo zobugebengu
(echaphazela loo nto ulutsha luvakalelwa kukuba kufuneka lithwale ummese kwiindawo ezinxulumene nezigqeba zokuzikhusela)
* lo luphando oluqhubekayo kwaye la manani aveliswa kwisampula yokuqala ye-132 abantu abaselula, abavela eSheffield, abaneminyaka eyi-16-17, baqokelelwa ngoJulayi no-Agasti 2018.
Ndiyamkela umthetho wabucala *
I-NCS Iiphelo zeeNqununu - Funda le nto ukubandakanyeka!
SUMMER 2018 IVELE 3
SUMMER 2018 IVELE 2
I-NCS Sheffield 2018 I-Graduation Party
I-GDPR Imigaqo-nkqubo Yobumfihlo - http://www.elementsociety.co.uk/privacy-policy/
© 2019 Wonke amalungelo agcinwe.